हनुमान चालिसा सिरानीमा राखेर सुत्नुस्, हुनेछ यस्तो फाइदा… – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /रोचक/हनुमान चालिसा सिरानीमा राखेर सुत्नुस्, हुनेछ यस्तो फाइदा…
हनुमान चालिसा सिरानीमा राखेर सुत्नुस्, हुनेछ यस्तो फाइदा…
ठमाडौं । राति निन्द्रा नलाग्ने समस्याबाट तपाई पीडित हुनुहुन्छ ? पछिल्लो समय धेरै मानिसहरु यस्तो समस्या लिएर चिकित्सककहाँ पनि पुग्ने गरेका छन् । व्यस्त जीवनशैली, तनाव, मोबाइल लगायतका उपकरणका कारण राति निन्द्रा नपर्ने समस्या रहेका छन् ।
हिन्दू धर्मशास्त्रका विभिन्न ग्रन्थले भने सुख शान्ति र ऐश्वर्य प्राप्तिका लागि रातिको निद्रासँग गहिरो सम्बन्ध रहने बताउँछ । राति राम्रो निद्रा परेन भने शरीर आलश्य बन्छ । दिनभर थकानको अनुभव हुन्छ । त्यसैले दिनभरको थकान मेटाउन राति निद्रा अर्थात रातभरीको विश्रामले मात्र सम्भव छ । दिनभरीको सुख शान्तिका लागि सुत्ने समयमा सिरानी मुनी यी पाँच चिज राख्नु उत्तम हुने शास्त्रले बताउँछ ।
दुर्गा सप्तसती पाठ
अहिले नवदूर्गा पूजाको समयपनि रहेको छ । यस समय जमरा राखिएको वा नवदूर्गा पूजा गरिने गरिन्छ । कतिपयले दैनिक चण्डी अर्थात दुर्गा सप्तसती पाठ गर्ने गरेका छन् । शास्त्रमा यसको ठूलो महत्व रहेको बताइन्छ । उक्त दुर्गा सप्तसतीको पुस्तकलाई सिरानी मुनी राखेर सुत्दा भयबाट मुक्ति मिल्ने शास्त्रमा उल्लेख छ । यसले दिनभर हुने चिन्ता र तनावबाट मुक्ति हुने विश्वास गरिन्छ ।
हरेक रात सुत्ने बेलामा हनुमान चालिसा या सुन्दरकाण्ड पाठ गरेर पुस्तकलाई सिरानीमुनी राखेर सुत्नुस् । शास्त्रका अनुसार यसो गर्दा मन एकाग्र भएर शान्त हुन्छ । मनमा डर, त्रास र अहंकार हट्छ भने सपना समेत राम्रो देखिन्छ ।
भुत–प्रेत, ऐठन हुने समस्या छ भने राति सुत्नेबेला सिरानमुनि फलामको कुनै चिज राखेर सुत्नु उपयुक्त मानिन्छ । यसले तपाइँको नजिक नकारात्मक उर्जा आउनबाट रोक्छ । बालवालिका सुत्ने बेला सानो कैँची वा चकु सिरानी मुनी राख्ने चलन पनि यसकै कारण रहेको पाइन्छ । बालबालिका सुत्ने खाटको सिरानमुनि फलामबाट बनेका चिजहरु राखेपनि धार भएका वस्तुहरु राख्नु हुँदैन ।
भगवानलाई अर्पण गरिएको फूल
सुत्ने समयमा सिरानी मुनी भगवानलाई अर्पण गरेको फूल राख्दा मनमा शान्ति प्राप्त हुने शास्त्रमा उल्लेख छ । यसो गर्दा निद्रा पनि छिटो लाग्ने र विहान उठ्दा ज्यानमा पुनर्ताजगीको आभाष हुने शास्त्रमा बताइएको छ । पछिल्लो समयमा थेरापीमा समेत यस्तो प्रयोग हुन थालेको छ ।
सिरानी मुनी राखेर सुत्ने र विहान उठेर शिवलिङ्गमा अर्पण गर्दा शुभ फल मिल्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । शास्त्रका अनुसार यसले राहुको प्रभावलाई कम गर्छ र खराव सपना वा मानसिक तनाव हुनबाट मुक्ति मिल्ने विश्वास गरिन्छ ।
ज्योतिष शास्त्र अनुसार कुनबार जन्मेको मानिसले कति धन कमाउँछन ? हेर्नुहोस
यी ३ याेगमा जन्मिएका मानिसलाई धन, वृद्धि र लक्ष्मीको कृपा सधै रहन्छ…
मंगलवार हनुमान जी को पूजा गर्नुहोस नसोचेको लाभ मिल्नेछ ….